भारतीय सुरक्षा सेनालाई लखेट्न तयार भए कञ्चनपुरबासी, बढ्यो मुठभेडको सम्भावना (हेर्नुहोस् भिडियो)
- नेपाली सन्देश बुधबार, बैशाख १९, २०७५ , 5K जनाले हेर्नुभयो
किन चाहियो मोदीलाई यति धेरै सुरक्षाबल ? यस्तो छ रहश्य !(हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
हात्तिले मुखबाट धुवाँको मुस्लो उडाएको भिडियो भाइरल ! बैज्ञानिक पनि आश्चर्यमा परे>>>हेर्नुहोस भिडियो
मोरङमा चमात्कारीक सर्प निस्किएको भन्दै हेर्नेको भीड, युवकले सर्पलाइ मुखमै हाल्दा पनि केहि गरेन (भिडियो सहित)
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को ज्यादति रोक्ने नेपाल सरकारले कुनै कदम नचाले एसएसबीको प्रतिवाद गर्ने कञ्चनपुरबासीले चेतावनी दिएका छन् । जंगली जनावरको आक्रमण रोक्न भारतीय पक्षसँगको सहमति लिएरै लगाइएको तारबार एसएसबीले उखेलेर फालेपछि पुनर्वास नगरपालिकामा तनाव बढेको हो । टोल–टोलमा माउन्टेन कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीयले बेलैमा सरकारले यो विवाद हल गर्न नसके यसले अप्रिय मोड लिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्ला मध्ये २४ जिल्लामा सीमा विवाद छ । यो विवाद अहिलेको मात्र होइन बर्षौ देखि भारतको मिचाहा प्रवृतिका कारण सीमा क्षेत्रका नेपालीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय कञ्जनपुरको पुर्नवासस्थित १ सय ९५ सीमा स्तम्भ नजिक भारतीय पक्षसँगको सहमति मै नेपालीले निर्माण गरेको विद्युतीय तारबार भारतीय सीमा सुरक्षाबलले उखेलेर फ्याँकेको छ । योसँगै दुई देशबीचको सीमा विवाद फेरि चर्किएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको इतिहास लामो छ । सीमा विवाद समाधानका लागि बेलाबखत पहल भएपनि समाधान हुन भने सकेको छैन । पछिल्लो समय भारतीय पक्षसँगको सहमतिअनुसार नेपाली पक्षले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ मा पर्ने १ सय ९५ नम्बर सीमास्तम्भ नजिक करिब ६ लाख रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएको विद्युतीय तार भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले उखेलेर फ्याकेपछि तनाव श्रृजना भएको छ ।
त्यतीमात्र होइन एसएसबीले विवादित क्षेत्रको अनुगमनका लागि गएका नेपाली जनप्रतिनिधिलाई डेढ घण्टासम्म रोक्यो । जसको कारण २०० नम्बर पिलर कहाँ हो भन्ने विवाद नै हो । भारतले यो पिल्लर नेपालको पुनर्वास रहेको दाबी गरीरहेको छ भने नेपालले भारतको कारगिल भन्दा दक्षिणमा रहेको दाबी गरेको छ ।
पुर्नबासमा मात्र होइन भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्ला मध्ये २४ जिल्लामा सीमा विवाद छ । भारतसँगको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा भारतले ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
भारतले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ स्थित लिपु लेक र लिम्पियाधुरामा मात्र ३७ हजार हेक्टर भूमी अतिक्रमण गरेको छ । यस क्षेत्रमा भारत र चीनले सन् २०१५ मे १५ मा नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमी अतिक्रमण हुनेगरी सम्झौता गरेपनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन ।
यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा राख्नुपर्ने सीमाविद्हरुको भनाइ छ । त्यस्तै भारतले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा पनि धेरै भूमी अतिक्रमण गरेको छ ।
साविकको सुस्ता गाउँपालिकाको ९ ओटा वडा मध्ये हाल एउटा वडा मात्र बाँकी छ । अधिकांश सीमा क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेपनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन ।